Maibahoaka Ivato : Miatrika fiofanana ireo delegen’ny serasera
Nanomboka omaly ary hifarana ny 15 marsa izao. Miatrika fiofanana eny amin’ny ivon-toerana fampianarana sy fampiofanana momba ny haino aman-jery (CEFOM) eny Maibahoaka Ivato ireo delegen’ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana isan-tokony. Ankoatra ireo …Tohiny
Tsiroanomandidy : Olona efatra matin’ny fiara sprinter
Namoa-doza indray ny fiara taksiborosy sprinter, ka lehilahy miisa efatra no namoy ny ainy vokatr’izany, raha toa mpandeha miisa sivy no naratra mafy. Tany amin’ny lalam-pirenena voalohany, tao Ankadilalana, distrikan’i Tsiaroanomandidy no nisehoan’ity lozam-pifamoivoizana mahatsiravina …Tohiny
Nosy Mitsiho : Olona 15 saika haondrana any Mayotte
Olona 15 izay nahitana ankizy miisa 05 no saika naondrana an-tsokosoko tany amin’ny nosy Mayotte ny alahady vao maraimbe lasa teo. Tao amin’ny nosy Mitsiho izy ireo no tratran’ny zandary avy ao amin’ny kaompanian’Ambilobe rehefa …Tohiny
Savorovoro tany Toliara : Mitohy ny fanadihadiana ireo olona 65
Mbola nitohy hatramin’ny omaly alatsinainy ny fanadihadiana ireo olona miisa 65 nosamborina sy notazomina tao amin’ny biraon’ny mpitandro filaminana tany Toliara noho ilay korontana sy sakoroka be niseho tany an-toerana ny zoma lasa teo. Mbola …Tohiny
Nanomboka omaly ary aharitra roa andro any Addis-Abeba, Ethiopie ny fivoriana an-tampony faha-28n’ ny vondrona Afrikanina. Marihina fa firenena afrikanina miisa 54 no mivondrona ao anatin’ity vondrona ity. Ary amin’ny maha-pikambana an’i Madagasikara ao anatin’izany ...Tohiny